China Salon mankasitraka onja telo heta mifangaro ioda laser 808 755 1064 DY-DL601 fanamboarana sy orinasa | Danye
Ny salon dia mankasitraka onja telo mifangaro ioda laser 808 755 1064 DY-DL601
808 755 1064 onja mifangaro diode teknolojia fanesorana volo laser; Ampiasao mangatsiaka kokoa ny Japan TEC, ny maripana optimum dia mankany amin'ny -5 degre; Azo antoka, tsy misy fanaintainana, ahazoana aina, tsy misy fotoana iainana; Modely: DY-DL601
Amin'ny alàlan'ny milina fanesorana volo laser diode maharitra 808nm 755nm 1064nm, ny halavan'ny fidirana mahomby amin'ny halavany dia mety hahatratra ny vatan'ny lasibatra (papilla volo), ny fepetra fiarovana amin'ny hoditra sahaza mba hiantohana ny fahasimban'ny vatan'ny lasibatra, ary ny hoditra saika tsy voa, mba hiantohana ny fiarovana ny ny fitsaboana. manakana ny volo tsy hitombo indray, noho izany ny fanesorana volo maharitra. ny masinina fanesorana volo laser dia mety hampihena ny mason-koditra ary hampiroborobo ny famerenan'ny collagen ny hoditra. Tsy mila miahiahy momba ny olan'ny masonkoditra matevina sy ny hoditra maina aorian'ny fanesorana volo amin'ny laser safira
Onja 3 ao amin'ny lohan'ny fitsaboana 1 dia miasa amin'ny halalin'ny volon'ny volo mba hahazoana fahombiazana tsara kokoa;
755nm ny halavan'ny onja manokana ho an'ny volo maivana amin'ny hoditra fotsy;
808nm halavan'ny halavan'ny hoditra sy ny volon'ny volo rehetra;
Halavan'ny 1064nm amin'ny fanesorana volo mainty;
1 ： Ny karazana fanesorana volo amin'ny vatana (volo amin'ny tarehy, manodidina ny faritra molotra, volombava, underarm, volo amin'ny sandry, tongotra, tratra ary faritra bikini)
2 ： famelomana hoditra amin'ny laser
Laser karazana diode laser 3 onja
Fomba fanaterana fitambarana safira mivantana
Ampidiro Herin'ny fitaovana 1600W
Pulsa sakany 80-200ms (misy Max.350ms)
Fomba mangatsiaka Rindrambaiko mivezivezy amin'ny rivotra + rano + mangatsiatsiaka semiconductor
Ny haben'ny masinina L55 * W38 * H36
Lanja afa-karatsaka 18kgs
Teo aloha: Port880nm / 810nm diode fanesorana volo laser DY-DL101
Manaraka: ROHS nankatoavina fanesorana volo hatsaran-tarehy 755 808 1064 laser DY-DL801
Herinaratra mahery vaika 808 755 1064 onjam-pifangaroan'ny ...
Nankatoavin'ny ROHS ny fanesorana volo hatsaran-tarehy 755 808 1064 ...
Portable 808 755 1064 mikorontana amin'ny asa ...